Ilaaliyaal ah ee aad casriga ah: Best Android Game maamusha
Ciyaaro shaashadda taabasho noqon karaa mid murugsan oo wax aad looga xumaado. Inkasta oo ay awoodaan in ay ka soo garaac telefoonka aad Android iyo waxa gurguurta oo in yar oo khiyaali buuxda oo ku saabsan fasax qado aad u wanaagsan yahay, isagoo aan lahayn dareen-celin la taaban karo ku dishaan karaa waayo-aragnimo ah. Isdaafacayaa, waxaa jira pack ah ilaaliyaal in effortlessly lifaaqi kartaa qalabka Android aad iyo aad ciyaari karo kulan waqti.
A xukuma ciyaarta waa qalab loo isticmaalo la kulan ama nidaamyada dheeldheel in la siiyo talooyin ciyaarta video ah, sida caadiga ah si ay u maareeyaan shay ee ciyaarta. Qofka xukuma A waxaa guud ahaan ku xiran computer ah taasi oo ka cable ama xarig. Qalabka Input in lagu kala saaraa sida ilaaliyaal ciyaarta ku jira jiir, gamepads, teebabka, joysticks, iwm qalabka ujeedada gaar ah, sida qoryaha fudud kulan oo giraangirihiina way isteerinka toogtay kulamada baabuur wadista, sidoo kale waa mid ka mid ah ilaaliyaal ciyaarta. Game ilaaliyaal lagu talo galay oo la xoojiyay sanadihii la soo dhaafay si ay ugu soo dhaweeyaan user sida badan tahay.
Top 10 Game ilaaliyaal Android
1. Steel Taxanaha Stratus Wireless ay ciyaareyso ay maamusha
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee ilaaliyaal ciyaarta android. Steel Taxanaha farshaxan dhowr maala ciyaaraha wanaagsan, oo ka kooban Xaaladda Wireless ay ciyaareyso ay maamusha. Tani waxay awood leh hawlaha siyaada la macruufka qalabka iyo kulan mobile in ay yihiin qofka xukuma-karti. Waxay isticmaalaan Bluetooth 2.1 inuu la telefoonka oo loo malaynayo in la socon toban saacadood mas'uul. La dhigaa meel wax yar sida qofka xukuma Madaxweyne Siilaanyo Oo ah sidoo kale waa in si fiican loo yaqaano.
2. Phonejoy xukuma
Maamusha Phonejoy ayaa la qorsheeyey inuu wax ka beddelo telefoonka galay qofka xukuma kulan. Waxa intaa dheer in badhamada si caqli bixiyey, oo waxaa loo kala qaybiyay laba qaybood kala qalab Android ama macruufka, ay qayb ka muuqataa oo waxaa si wanaagsan jaban. Baakadaha Pricier riday xirayaasha ka badan sida adabtarada audio 3.5mm.
3. Nyko Playpad Pro
Tani Android ilaaliyaal ciyaarta waa mid ka mid ah weligood ilaaliyaal ciyaarta ugu doonayay oo caan ah. Qofka xukuma waxa uu leeyahay oo ah hab maamuuska qariyey filaayo in tegra kulamada Android oo caan ah, oo waa dabeecadda in mid ka mid ah ugu fiicnaa ilaaliyaal ciyaarta Bluetooth farshaxan. Qofka xukuma waxa uu leeyahay ulo laba suulka, badhamada, pad jiho iyo laba kiciya. Tani waxay qofka xukuma ciyaarta Android uu leeyahay tayada si fudud gacanta lagu ciyaaraha. Qofka xukuma Kulankaan ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah app ah oo uu awood u ah inaad kala soo baxdo ciyaarta profiles la horyaal hore.
4. iControlPad 2
Tani waxay qofka xukuma ciyaarta Android lagu buuxin karo quwada laydhka iyo waxa ay leedahay afar hababka tallaabo kala duwan ee Android tirinta keyboard, mouse, joystick oo isku jira. ICnotrolIPad Tan waxay ku tusaysaa dhan badhamada iyo abuuraa aad tahay qof aqoon in tirinta badhamada jiho, laba pads suulka iyo kiciya. Waxaa sidoo kale soo bandhigay labixiyo adag dayactirka oo dhaqdhaqaaqa ka soo dambe ee xukuma in ay si adag u xajin aad telefoonka ka badan unugga. Waxaa qoreysa xajinta caag comfy dhinaca. iControlPad kale oo uu leeyahay USB ku amraya cable si ha ka welwelin in bateriga aad dhici doonaa jidka. Qofka xukuma Kulankaan ayaa sidoo kale lahaan 55 keyboard muhiim ah badhamada garabka iyo tayo sare leh Dpad. Waxa kale oo ka shaqeeya sida caadiga ah ku qariyey. Haddii aad ka qaadaan tan qofka xukuma ciyaarta Android mar u socon lahaa ilaa 14 saacadood.
5. Gametel Bluetooth maamusha
Tani waxay maamusha Android oo kulan macruufka isticmaalaan cadaadi guga-raran ah oo si aad telefoonka ammaan halka isticmaalka farsamada aad ah jiho-pad iyo qalab kale badhamada. Waxay isticmaalaan link a Bluetooth in ay ku biirto oo USB ah micro in ay ka qaadaan. Waxaa la shaqaysaa labada Android iyo qalabka macruufka.
6. Joypad Game tacsiyeeyaan
Tani waxay si rasmi ah waa app ah, laakiin mid ka mid ah digtoonaan. Waxaa badala telefoonka galay qofka xukuma ah si aad u fara badan badhamada waaweyn si ay cadaadis u ciyaarayay kiniin ah lala. Best of dhan, waa lacag la'aan ah oo ah qiimaha sidaas ma jirto sabab in ay tani ka mid siin go a marka laga reebo in aad si dhib leh kula qaado labo qalabka mar. Waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ilaaliyaal ciyaarta android.
System 7. Moga Moblile ay ciyaareyso ay
Tani waa qofka xukuma ugu muhiim ah oo caan ah oo qalabka Android. Tani waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee ilaaliyaal ciyaarta Android Bluetooth. Waxay isticmaalaan 2 baytariyada AAA. Tani waxay qofka xukuma ciyaarta Android ayaa haysta in DSHISKA aad telefoon si adag marka aad ciyaaraha. Phone kasta oo gacanta la balladhka 3.2 inches haboon in qofka xukuma kulankaan. Laakiin sida qofka xukuma kulankan waxaa ku wehliyay la Bluetooth si aadan u baahnayn in aad ku lifaaqdo la telefoonka. Tani waxay qofka xukuma ciyaarta Android kaloo la shaqeeyaa kiniiniyada. Tani waxay maamusha ciyaarta Android uu leeyahay batariyo karin dheer ilaa 18 saacadood.
Tani xariif ah oo ugu wanaagsan ee qofka xukuma ciyaarta android waa siyaada cheap yar. Waxaa inta badan waa ul suulka in ulo si aad shaashadda si aad u hesho accurateness dheeraad ah oo ku Classics Arcade ah. Hubi in bandhigay waa wasakh oo lacag la'aan ah ka hor inta walbo oo idinku waajibka ah inaad hesho masaafada gal ah ee this qalab yar. Tani qalab Android waa mid ka mid ah qalabka ugu doonayay.
9. Evolution Drone:
Tani waa qofka xukuma ah understated-raadinaya in uu leeyahay badhamada oo dhan meelo sax ah. Waxay waxaa lagu qori karaa jeebka sidoo kale, si aad u agagaarka qaadi karaan dhibaato lahayn. Waxay u muuqataa in midabo kala duwan, ayaa baateri in-dhisay dabayn karo oo tag ah qiimo macquul ah. Tani waxay qofka xukuma ciyaarta android waxaa loo isticmaalaa ku dhufto badan.
Tani waxay qofka xukuma ciyaarta android waa nidaamsan sababta oo ah waxa aad u fasaxaya in ay ka faa'iideystaan ​​xukuma ah waxaa laga yaabaa in aad horey u. Waxa kaliya ee aad u leeyihiin in ay qaataan $19.95 doolar si ay u la wareegaan tan qofka xukuma ciyaar cajiib leh kartida fiican.
Top 10 kulan oo uu u Android Tablet
Sida loo Mirror Your Android Screen in PC la Chromecast
Best kulan android 2015
Top 10 Best Android Game Emulator in Download for Windows
> Resource > Emulator > ilaaliyaal ah ee aad casriga ah: Best Android Game maamusha